Maaskarada afka oo lacag la’aana, lana siin doono muwaadiniin lasoo xulay (gratis mundbind til udvalgte borgere)
Ka bilaabato maalinta isniintaa t. 24 agoosto tahay, waxaa kumuune Aarhus qaybin doonaa maaskaraha afka, lana siin doona dadka qaata kontanthjælp-ga, kuwa qaata integrationsydelse iyo dadka kaloo nugul, dadkaa soo ah dadka ay culays dhaqaale oo xoog leh ku tahay gadashada maaskaraha afka.
Waa waajib inla xirto maaskaraha afka marka aad raacayso gaadiidka dadwaynaha. Dowladu ayadoo og duruufaha dhaqaale ee dadka qaar haysta ayay go’aansatay, in maaskaraha afka lacag la’aan looga dhigo dadkaan aan kor ku xusnay ee qaata lacagta kontanthjælp-ga, integrationsydelse iyo dadka kaloo nugul, dadkaa soo ah dadka ay culays dhaqaale oo xoog leh ku tahay gadashada maaskaraha afka.
Dadka degan degmada Aarhus waxay wargelintaan utahay, ineey heli karaan, laguna siin karo maaskaraha afka oo lacag la’aana, hadii aad isu aragto inaad ka tirsan tahay dadkaan dhaqaale ahaan nugul, waxaa lagu siin doonaa 5 – 10 xabo maaskaro afka ah markiiba.
Maaskaradaan afkana waxaa la qaybin doonaa saacadaha shaqo inta lagu jiro, waxaanad ka qaadan kartaa adreesyada soo socda:
Borgerservice i Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2
Jægergården, Værkmestergade 15 B
Værestedet, Jægergårdsgade 107
Rusmiddelcenter Aarhus, Sumatravej 3
Waajibnimada ah inla xirto maaskaraha afka inta aad isticmaalayso gaadiidka dad waynaha, ilaa hadda sharci ahaan wuxuu ku egyahay ilaa inla laga gaaraayo 31. oktober.
Warbixin intaan ka badan oo ku saabsan maaskaraha afka, waxaad ka aqrisan kartaa xafiiska wasaarada gaadiidka- iyo guryaha bogooda wacyi gelinta, kana hadlaaya gaadiidka dad waynaha:
Sida saxdaa ee loo xirto maaskaraha afka, waxaad kala socon kartaa bogga internetka ee hay’adda caafimaadka:
Dokk1 Hack Kampmanns Plads 28000 Aarhus C
Du skal bestille tid til personligt fremmøde hos Borgerservice i Dokk1